Ukukhulelwa-Ukuba Ngumzali | Eyedwarha 2021
USuku lwaBantwana lwe-2020: Iingcamango zeengubo zokunxiba eziNxibileyo zale mini eIndiya
Olu suku lwabantwana, hombisa umntwana wakho ngezimvo ezintle zokunxiba zabantwana. USuku lwaBantwana lubhiyozelwa ngemidlalo emininzi kwilizwe lethu. Zonke izikolo kunye namaziko emfundo aqhuba iinkqubo zokukhanyisela iingqondo zabaselula ngokubaluleka kolu suku.
Iingcebiso ezili-10 zokufumana isisu esisicaba emva kweC-c
Ukufumana isisu esicaba emva kwec-c candelo akunakwenzeka njengoko ucinga. Ukuba ulandela iposti elungileyo c-icandelo lesisu elisebenzayo, ungaphulukana nengxowa. Ukuya
Iindlela ezilishumi zokunciphisa ubungakanani bebele ngexesha lokuncancisa ibele
Kukho iindlela ezilungileyo zendalo zokunciphisa ubungakanani bebele ngelixa uncancisa. Ezi ngcebiso ziyawaphula amanqatha amabele kwaye uzenze zomelele. Nazi iindlela ezilungileyo
Iingcamango ezingama-30 zokunxiba eziMnandi kuSuku lwaBantwana
USuku lwaBantwana lujikeleze ikona. Nazi ezinye izimvo ezintle zokunxiba ezintle zokunxiba umncinci wakho. Jonga.
Iingcebiso ezili-14 ezilula neziSebenzayo zokuThoba umzimba emva kokuKhulelwa
Nanga amanye amacebiso asebenzayo okunciphisa umzimba emva kokukhulelwa okubandakanya ukuncancisa, amanzi okusela, ukuzilolonga, ukutya ukutya okusempilweni, ukulala ngokwaneleyo nokungaseli tywala.
Ukutya oku-8 kokuKhulelwa uMntwana onguNkwenkwe
Okunye ukutya okuza kukhulelwa inkwenkwe kunokukunceda wandise amathuba akho okuba nomntwana oyindoda. Ukuba utya oku kutya ukhulelwe inkwenkwe ngokwendalo, amathuba akho oku
Abafazi abakhulelweyo kufuneka bakuphephe ukuhlala ngemilenze enqamlezileyo. Kuyacetyiswa ukuba ujike wonke umzimba kunokuba ujonge esinqeni nje. Izikhundla kufuneka zitshintshwe kwaye zitshintshwe rhoqo.
Iimpawu zeBelly zokubonisa ukuba ukhulelwe ngenkwenkwe
Xa ukhulelwe, kunokuhenda ukuzama ithamsanqa lakho ngeendlela ezahlukeneyo zokuqikelela ngokwesini.
Ukutya okuphezulu oku-10 kokutya ngexesha lokukhulelwa komntwana okrelekrele
Ukutya okutyiwa ngumama ngexesha lokukhulelwa kukwadlala indima ekubeni umntwana uza kuba krelekrele okanye akrelekrele kangakanani. Isipinatshi, iziqhamo, amaqanda, itshizi, njalo njalo, zezinye zokutya anokuzitya umama ngexesha lokukhulelwa kwakhe.
Isisu sebhanti Emva kweC-Icandelo Ngaba kunyanzelekile
Ukunxiba ibhanti lesisu emva koqhaqho ukuhanjiswa kufuneka. Ukwazi ukuba ikunceda njani ubuyele esimeni kwaye ikwanceda ekubuyiseleni icandelo kwakhona ..
I-Hiccups Kwiintsana: Oonobangela, Iingcebiso zokuma kunye nokuyithintela
IiHiccups zenzeka xa izivumelwano zediaphragm yosana zibangela ukuba umoya uphume ngokunyanzelekileyo ngamazwi evaliweyo, enza isandi esirhabaxa. Kuqheleke kakhulu kwiintsana ezingaphantsi kweenyanga ezili-12 ubudala.
Ngaba ubusazi ukuba kutyiwa uPapaya, iAloe Vera kunye nePinapile kunokubangela ukuphuma kwesisu ekukhulelweni kwasekuqaleni?
Ukutya okuthile okufana nepapaya, idrumsticks, ikhala, ipayina, ipesika zinokubangela ukuphuma kwesisu xa kutyiwa kwikota yokuqala yokukhulelwa. Soloko uxoxa ngendlela otya ngayo kunye nokutya kunye nogqirha wakho ngexesha lokukhulelwa.
Kungenzeka njani ukuba ukhulelwe ngaphandle kokulalana?
Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngaphandle kokulala? Ewe, ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ungakhange ulale naye. Nangona ipesenti incinci kakhulu, kodwa kunokwenzeka.
Yintoni ebangela ukuba uBelly Hard ngexesha lokukhulelwa?
Ukwandisa isibeleko, ukukhulisa amathambo osana olungekazalwa, uhlobo lomzimba womama, amanqaku okolula njl njl, kunokwenza ukuba isisu sibe nzima ngexesha lokukhulelwa. Ukufunda ngakumbi ngezizathu kuya kukunceda wehle kwaye uqonde ukuba ingaba isisu sakho esomeleleyo siqhelekileyo okanye sifuna ukujongwa nzulu kwi-ob-gyn.
Iziqhamo ezomileyo kunye neenathi ngexesha lokukhulelwa: Izibonelelo, iingozi kunye nendlela yokutya
Izibonelelo zokutya iziqhamo ezomileyo kunye neenathi ngexesha lokukhulelwa kukuba ziyanceda ekuthinteleni ukuqunjelwa, zonyusa ukubala kwegazi, zilawule uxinzelelo lwegazi, zomeleze amathambo njl.
Iveki yokuncancisa yeHlabathi ye-2020: Iindlela ezili-13 zeNdalo zokuNyusa ukuBoniswa kweBisi lwebele
Iveki yokuncancisa yeHlabathi (i-WBW) iqaphela minyaka le ukusuka kwi-1 ukuya kwi-7 ka-Agasti. Iindlela zendalo zokunyusa ubisi lwebele okanye ukuveliswa kubandakanya amanzi okusela rhoqo, ukuphumla okufanelekileyo kunye nokulala rhoqo, ukutya okusempilweni, ukunxibelelana kolusu nolusu njl.
Kutheni kufuneka utye ikhokhonathi ngexesha lokukhulelwa
Nasi isizathu sokuba abafazi abakhulelweyo batye ikhokhonathi. Ngoku izibonelelo zecoconut ngexesha lokukhulelwa kwaye ikhuselekile kakhukhunathi ngexesha lokukhulelwa. Funda ukuze wazi ikhokhonathi
Iindlela ezikhuselekileyo nezisebenzayo zokuKhupha isisu ekhaya
Ukuqhomfa kungenziwa ngokwendalo kunye nolawulo lwezonyango. Indlela yendalo ibandakanya ukusetyenziswa kweziyobisi, amayeza afana neparsley, iziqhamo ezityebileyo ku-vitamin C ngelixa iindlela zokongiwa kwesisu kufuneka zibekwe ngugqirha wezifo zabasetyhini.
Ngaba uMaggi usempilweni ekukhulelweni? Uhlalutyo lweengcali
Ngaba umaggi usempilweni xa ukhulelwe? Inesithako esibizwa ngokuba yi-MSG esimbaxa esinetyhefu. Xa isetyenziswe ngokumodareyitha ayinabungozi kodwa xa usitya
Iinyanga ezi-8 zokuKhulelwa eziza kuthathwa
Nalu uluhlu lweenyanga ezi-8 zokukhulelwa ekufuneka uzilandele ukuze ufumane ukhuseleko kunye nengxaki yabasebenzi yasimahla
Ngaba iiflethi zombona zilungile empilweni
Ukusetyenziswa kwemultani mitti kulusu
usuku olumnandi unqwenela umalume kunye anti
Uyenza njani i-veg roll indian